» युट्युबबाट मासिक कति रुपैयाँ कमाई हुन्छ ?
युट्युबबाट मासिक कति रुपैयाँ कमाई हुन्छ ?
१९ पुष २०७७, आईतवार २१:१०
चन्द्र घलान, १९ पुस । धेरै मानिसहरु युट्युबबाट कति कमाई हुन्छ ? भन्ने प्रश्न गर्नुहुन्छ । तर कसैले पनि यसको चित्त बुझ्दो जवाफ दिन तयार हुँदैनन् । यसको खास कारण हो, युट्युबमा गरेको दुःखको बारेमा थाहा नपाई कमाईको बारेमा मात्र जानकारी लिँदा मानिसलाई वास्तविक रुपमा कति मेहनत गर्नुपर्छ भन्ने थाहा हुँदैन । कोही भन्छन् युट्युबबाट करोडौँसम्म कमाउन सकिन्छ अनि कोही भन्छन् दुःख मात्र हो, कमाई केही पनि हुँदैन । तर यसको वास्तविकता के हो ? वास्तवमा युट्युबबाट कति कमाई हुन्छ ? आजको यो भिडियोमा म तपाईलाई मैले थाहा पाएसम्मको सबै जानकारी दिनेछु । जान्नै पर्ने कुरा सेरिजको केही भागमा म युट्युबको कमाई र यससँग सम्बन्धित केही जानकारीहरु दिनेछु जुन तपाईलाई जानकारीमुलक खुराक हुनसक्छ । प्रविधि सम्बन्धी अन्य जानकारीका लागि हाम्रो यस च्यानललाई र अर्को नयाँ च्यानल टेक्निकल सहयोगीलाई पनि सब्स्क्राईब गर्न नभुल्नुहोला । यी दुबै च्यानलमा तपाई प्रविधिसम्बन्धी भिडियोहरु हेर्नसक्नुहुन्छ । आउनुहोस् जान्नै पर्ने कुरा सेरिजको यो भाग सुरु गरौँ । हेर्नुहोस् भिडियो–
जनकारीको सुरुवातमै जानकारी दिनचाहान्छु वास्तवमै दुःख गर्नसक्ने, धैर्य गर्नसक्ने र सिकेर काम गर्नेहरुका लागि युट्युब पैसाको रुख जस्तै हो । तर सधैँभरि लाखौँ दिने पैसाको रुख होईन बरु त्यस्तो रुख जसलाई बिरुवादेखि नै रोपेर, मलजल गरेर हुर्काउनुपर्छ र पैसा पाउन थालेपछि पनि निरन्तर हेरचाहा गर्नुपर्छ । भन्नुको मतलब युट्युबमा तरिका पुराएर दुःख गर्नेहरुले त्यसको प्रतिफल पनि पाउँछन् । तपाईलाई अर्को पनि जानकारी होस् युट्युबमा मासिक १० हजारदेखि ५ लाखभन्दा बढी कमाउने युट्युबरहरु नेपालमै छन् । अर्थात यदि तपाईले पनि दुःख गर्नुभयो भने मासिक कम्तिमा पनि १० देखि २० हजार सम्म कमाउन सक्ने ग्यारेन्टि युट्युबले दिन्छ । युट्युबबाट पैसा कमाउनका लागि तपाईसँग एउटा युट्युब च्यानल हुनुपर्छ र त्यस च्यानलमा तपाईले कुनै एक क्षेत्रमा आधारित रहेर भिडियो निर्माण गरेर हाल्नुपर्छ । भिडियो निर्माणका लागि तपाई प्रविधि, मनोरञ्जन, जानकारीमुलक, शिक्षा, खेलकुद तथा अन्य विभिन्न विधालाई छान्नसक्नुहुन्छ । तपाईले कस्तो विधाको भिडियो बनाउनुहुन्छ र कति मेहनत गर्नुहुन्छ अनि तपाईको भिडियोमा कति विज्ञापन बज्छ भन्ने कुरामा तपाईको कमाई निर्भर हुन्छ ।
तपाईले जिमेल आईडीको मदतले युट्युब च्यानल बनाउन सक्नुहुन्छ । युट्युब च्यानलमा भिडियोहरु हाल्नथाल्नुभएपछि तपाईले १ हजार सब्स्क्राईबर र ४ हजार घण्टा वाच टाईम पुगेपछि गुगल एड्सेन्स अर्थात विज्ञापनका लागि आवेदन दिनुपर्छ । यसरी दिईएको आवेदन स्विकृत भएपछि मात्र तपाईले युट्युबबाट पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ । जिमेल आईडी कसरी बनाउने अथवा युट्युब च्यानल कसरी बनाउने भन्ने बारेमा हाम्रा अघिल्ला भिडियोहरु हेर्नसक्नुहुन्छ अथवा युट्युबमा नै कसरी बनाउने भनेर खोजेर सिक्नपनि सक्नुहुन्छ । तपाईको सजिलोको लागि हामीले बनाएका भिडियोहरु यस भिडियोको डिस्क्रीप्सनमा, आईबटनमा र अन्तिममा ईण्डस्क्रीनमा पनि राखिएको छ । कृपया त्यहाँबाट पनि हेरेर जानकारी लिनुहोस् । युट्युबबाट कसले कति कमाई गर्छ भनेर तपाई आफै पनि हेर्नसक्नुहुन्छ । हुन त च्यानल चलाउनेले नै वास्तविकता नबताएसम्म वास्तवमा उक्त व्यक्तिको कति कमाई भयो भनेर ठ्याक्कै हेर्न त मिल्दैन तर तपाईले एभरेजमा उक्त व्यक्तिले कति कमाउँछ भनेर हेर्नसक्नुहुन्छ । यदि तपाई त्यो तरिका जान्न चाहानुहुन्छ भने कृपया कमेन्टमा लेख्नुहोस् । यसबारेमा म भिडियो निर्माण गर्नेछु ।
यस सिरिजको अर्को भागमा युट्युबबाट पैसा कमाउने बारेको अर्को विषयमा चर्चा गर्नेछु । आजको भिडियो कस्तो लाग्यो ? कृपया कमेन्ट गर्नुहोस् । विभिन्न जानकारीलागि तपाई च्यानलका साथै मेरो व्यक्तिगत सोसियल लिंकहरुमा जोडिनसक्नुहुन्छ । मेरो च्यानल र व्यक्तिगत फेसबुक तथा ईन्ष्टाग्रामहरुको लिंक भिडियोको डिस्क्रीप्सनमा राखिएको छ ।